Waxaa jira meelo badan oo aad ka abuuri karaan maktabadda Lugood aad. Meesha maktabadda ku xirnaan doontaa isticmaala sahlo si ay u helaan maktabadda. Qof dooran karaan inay sidoo kale waafajinta maktabadda loo sameeyo gurmad ah in meel kale. Abuurista maktabadda badan Lugood caawisaa in laga hortago khasaare warbaahinta aad dhif u ah maktabadda Lugood aad. Apple baneeyo qalab in lagugu xiro maktabadda kaliya hal mar ah oo ka abuurista Maktabado badan kombiyuutaro kale xadeyn kartaa dadka isticmaala.
Si aad u xirmaan badan isticmaala qalab yeelan doonaan in ay leeyihiin codsi xisbiga saddexaad sida TunesGo si ay u toggle ay hindiseen. Isticmaalka TunesGo waa mid fudud tan iyo markii loo baahan doonaa in aad:
Connect TunesGo u qalab badan oo iyaga toggle marka aad jeceshahay in aad.
Tip1: Isticmaalka daruur kaydinta ah sida maktabadda Lugood ah.
Daruuro Kaydinta korodhay tirada laakiin dadka intooda badan si buuxda aanay ka warqabin ka faa'idaysigiisa. The faa'iidada ugu badan waa in laga heli karaa meel kasta oo aad u dheer sidii aad leedahay khadka internetka ah, Haddii users doonayaan in ay abuuraan maktabad qoyska ka mid ah ma ay yeelan doonaan in ay soo dirto maktabadda xubin kasta oo ay abuuri doonaa xisaabta lagu kaydiyo daruur sida Box iyo siin password helaan in ay xubin kasta oo qoyska.
Users sidoo kale u hagaagsan kartaa maktabadda si Lugood by kaliya doorashada sanduuqa dhibic sida waddo oo ay heli karaan maktabadda ka iPhone laptops iyo qalab kale oo kasta.
Tip2: koobiyo files qalabka android.
Dadka intooda badan waxay u muuqdaan in lagu fekero in maktabadda Lugood ah ka shaqayn kartaa oo kaliya qalabka ku shaqeeya tufaax ah. Tirada dadka ee Android users waa wax weyn oo qalabka kale iyo baahida loo qabo in nidaamka maktabadda Lugood leh android ayaa koray. Users hadda u hagaagsan karo xogta ay qalab android isticmaalaya TunesGo sida codsi saddexaad oo awood nidaamka.
Tip3: Maamul Android on Mac
Waxaa muhiim ah in aad u maamuli lahayd maktabadda ka MacBook. Waa qalliin oo kaliya version Mac laga heli karaa oo keliya. Waxay bixisaa hab aad u fiican in user a maamuli karo files in qaab kasta, si loogu badalo version macruufka iyo siyaabo kale oo gaar ah.
Nidaamku wuxuu yahay sida soo socota:
Connect qalab aad iyo abuurtaan TunesGo
Ka dib markii ay qalabka ku xiran iyo Click muuqda waafajinta Lugood in Android
Riix badhanka finder android on furmo suuqa iyo bilowdo maaraynta files
Tip4: koobiyo iyo xoojinta files qalabka kala duwan.
Koobiyeynta faylasha qalabka kala duwan laga yaabaa in siyaabo kala duwan hal nuqul laga yaabaa in macruufka Qalabka inay Lugood, ka Phone / iPod / iPod si Mac iyo Lugood in computer. Saddex Tani waa siyaabaha ugu waaweyn ee hal nuqul karo files in qalab gaar ah. Tani waxay dhacdaa inta badan haddii user a doonayo in uu abuuro gurmad ah maktabadda Lugood in qalab kale waxaa laga yaabaa in laba ama ka badan.
Tip5: uruuriyey faylasha maktabada
Tani waa in la helo files kala daadsan oo wuxuu u geliyey si. Waxay ka caawisaa si ay u yareeyaan tus tan iyo faylasha lagu habeeyay si.
First furi doonaa Lugood dooro doorashada iyo doorasho ka dibna horumarsan, in ka dib markii aad sii files warbaahinta abaabulay.
> Resource > Lugood > 5 talooyin aad u baahan tahay in la ogaado maktabadaha badan Lugood